Chris Brogan wuxuu ruxay BlogIndiana | Martech Zone
Sabti, Agoosto 15, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
"Hadda waan ogahay sababta aad u neceb tahay!", Ayuu ku heesay Chris (ala Limp Bizkit) hal mar oo ka mid ah dood wadaagga. Su'aashu waxay ahayd tixraaca waxa soo saara nacaybka ku jira adduunka warbaahinta bulshada. Xaqiiqdu waxay tahay, sida shakhsiyaadka internetka ay u dhisaan astaamo u gaar ah oo ay u horumariyaan codkooda iyo khibradooda ay u leeyihiin warshadaha fol dadka qaar ayaa ku naca Waxaan ka shakisanahay in qofna runtii neceb yahay Chris Brogan… laakiin haddii ay sameeyeen waa awoodiisa weyn darteed.
Chris Brogan BlogIndiana ruxday.
Chris wuxuu lahaa sagxad cajiib ah iyo soo bandhigid shaqsiyadeed - oo ay ku jiraan tixraacyo cajaa'ib leh oo caan ah (oo ay ku jiraan Fergy!) Waxaa jira hibo aan caadi aheyn oo aan ku arko kuwa hadla sida Chris oo aan ku arko Malcolm Gladwell, Seth Godin iyo kuwa kale… awooda lagu qaado arin aad u adag oo murugsan oo si fudud loogu sharxi karo.
Brogan wuxuu tan ku sameeyay sii waditaankiisa sumcadda casriga ah iyo sida ay baraha bulshadu ugu habboon tahay, laga bilaabo Ku baraarujinta ficilka la dheereeyey. Ka aqri boostada wixii faahfaahin ah, waa kan qeexitaankeyga:
Awareness - Ka faa'iideysiga suuqgeyn wax ku ool ah oo lagu barto adiga, wax soo saarkaaga, ama adeeggaaga.
Attention - Ka faa'iideysiga warbaahinta bulshada si dadka loo siiyo habab ay uga qeyb galaan.
Engagement - Isdhexgalka waara ee adiga iyo bulshadaada.
fulinta - Beddelka… soo dejinta, diiwaangelinta, iibsashada, iwm.
Kordhinta - Fursadda dilka kadib si kor loogu qaado dhacdada iyo natiijooyinka.
Chris wuxuu ku shaqeeyey hal-abuurnimada iyo shaqada adag ee qeexida nidaamka, markaa waxaan kaliya ku dari doonaa 2 senti (Waan necbahay waxan sameeya… waxay iga dhigaysaa inaan u ekaado sida kaliya ee aan ujiro gy Waxaan u maleynayaa inaan ahay!) Falanqaynta.
Waxaan u maleynayaa in falanqaynta ay fure u tahay… bilowga iyo dhamaadka howsha si ganacsigu uu ugu boodo howsha xoog faras badan oo dheeri ah - iyo sidoo kale inuu turxaan bixiyo oo uu hagaajiyo nidaamka markasta. Cabbiraadda natiijooyinka ayaa lagama maarmaan ah sidaa darteed ganacsatadu waxay fahmayaan halka laga hagaajinayo dhaqaalahooda kooban saamaynta ugu badan.
Aniga oo aan wali aqrin buuga Chris iyo Julian - Waxaan rajeynayaa in aan soo qaato oo aan arko sida horumarka iyo cabirka istiraatiijiyaddu ay ugu jiraan taxanaha.
Video: Sida ay u shaqeyso Warbaahinta Bulshadu
Aug 16, 2009 at 2: 27 AM
Aad bey noogu wacan tahay inaad dhahdo, Doug. Waxaan haystay waqti yar, waana ku faraxsanahay inaan qolka kugula jiro, adigoo ah mid ka mid ah xiddigaha maxaliga ah. Waxaan rajaynayaa inay waxtar lahayd, waxaanan rajaynayaa inaan dhawaan ku arko. :)
Aug 17, 2009 at 2: 36 AM
Ma sugi karno in waddooyinkeennu mar kale ka gudbaan!
Agoosto 16, 2009 saacaddu markay ahayd 11:18 PM
Haye Doug, waan ku raacsanahay in ku darista Falanqaynta ay tahay tallaabo muhiim ah, laakiin waxaan u maleynayaa inaad meel khaldan dhigtay. Waxaan sameyn lahaa Falanqeyn kadib fulinta iyo kordhinta kahor, maadaama kordhintu runtii tahay bar bilaw, oo aan aheyn barta dhamaadka.
Aug 17, 2009 at 2: 38 AM
Waan kula jiraa, Tim. Xaqiiqdii waan ku dhibtooday inaanan falanqeyn ku dhex marin tallaabo kasta! Waxaan ahay jimicsi guud oo ku saabsan qiyaasta iyo kormeerka. Inteena ugu badan ayaa mashquul ku ah fulinta oo aanaan inta badan waqtiga qaadan.
Xaqiiqdii waxay ahayd wakhti aad ku qaadatid waqti weyn toddobaadkan, Tim! Haddii aad jeclaan laheyd inaad sameyso boosteejo martida martida ah - fadlan la xiriir!